ဘိုးတော်လေလား၊ လူလိမ်လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ဘိုးတော်လေလား၊ လူလိမ်လား
ရင်ထဲမှာ ကျလိကျလိ အဆောင်လက်ဖွဲ့ ယူကြဦးမလား
ပန်ပန်ရေ… လှိုင်သာယာမှာ အဲ့ဒီလို ဘာမှန်း ညာမှန်းမသိတဲ့ လူတွေရှိတယ် … ကိုယ်တောင် ယောင်လည်လည်နဲ့ စပ်စပ်စုစု ရှေ့တိုးပြီး မယုံမကြည် သံသယစိတ်နဲ့ .. ပါးစပ်ဟောင်းလောင်း ဟပြီး …. သွားကြည့်သေးတယ် …အတူပါတဲ့လူက ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ မကြည့်နဲ့ မတော်လို့ ဟိုကမြွေ ပါးစပ်ထဲဝင်လာမယ်ဆိုပြီး ဂုတ်ဆွဲ ခေါ်ထုတ်တော့မှ … မကျေမနပ်နဲ့ ပြန်ခဲ့ရတယ် … ။ နေ့တိုင်း နီးပါး (မိုးမရွာတဲ့ရက်) ဆိုလျှင် … လူတွေ အုံခဲနေအောင် မြွေလင်ပ္ပါယ်လိုလိုဘာလိုလိုပြတယ် .. ပြီးတော့ .. ဦးထုတ်ချွတ်ပြီး ပိုက်ဆံ အလှူခံတယ်
ပန်ပန်ပြောတဲ့ ဘာအစီရင်လည်း မသိတဲ့ဟာကြီး ပါးစပ်ထဲ ထည့်ထားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. ဘာပိုး ညာပိုးတွေ ကပ်နေလို့ ၀မ်းလျှောနေဦးမယ် …. ရွံစရာကြီး
အစကတော့ ကောင်လေးပါးစပ်ထဲ အဆောင်ဆိုတာကြီး ငုံခိုင်းပြီး ဘာလုပ်မလဲလို့ စိတ်ဝင်စားကြမှာပေ့ါ
အဲဒီလူလိမ်မျိုးတွေက တောရော မြို့ပါ အနှံ့မှာလိုက်လိမ်နေကျပါ။
ဒါမျိုးတွေက ဟိုးအရင်ကလည်း ရှိပါတယ်
ပန်ပန်ရေ ဒါဘိုးတော်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး လူလိမ်ပဲ ဖြစ်မှာကျိန်းသေတယ်
ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ဘက်ကို သွားရင် အမြဲ မြင်နေကျ မြွေ ပိစိညှောက်တောက် အရောင်လေးတွေနဲ့.. ပြီးတော့ ထိုင်ပြီး ဘာရောင်းနေလဲ မသိဘူး။
အဲဒါ အိမ်တွင်း အလှမွေး မြွေလေးတွေလေ အမရဲ့
အဆိပ်မရှိပေမယ့် အကောင်သေးလေးတွေဆိုတော့ ဟိုထဲဒီထဲ ၀င်ကုန်ရင်အခက်
အဲဒီမြွေပိစိညှောက်တောက် ၁ ကောင် ငယ်ငယ်က မွေးဘူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက တကောင် ၂၀၀၀ ပါ … ကိုင်ကတာတော့ အသဲယားစရာပါ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူကလေထဲမှာတာင့်တောင့်ကြီး ခေါင်းကလဲဟိုရမ်းဒီရမ်းနဲ့ ။ အိမ်
ပေးလိုက် ပါတယ်။ မြွေပွေးတော့ မမွေးပါဘူး။ ကြောက်လို့ ။
BAK ရှေ့မှာ ရောင်းတာမို့လား မြွေရောင်စုံလေးတွေ … သူတို့ပြောတော့ မြွေသူတော်လေးတွေတဲ့ … ။မြွေနဲ့မတူပဲ သနားစရာတောင်ကောင်းတယ် … သူ့ခမျာ ပိစိညှောင့်တောင့် …တီကောင် ဆိုဒ်ကြီးလေးလောက်ပဲရှိပြီး ရှည်ပဲ ရှည်တာ… ။
ရှောပင်းစင်တာတွေရောက်လျှင် အိတ်ဖွင့်ဖွင့်စစ်တာကို အမြင်ကတ်လို့ … အဲ့မြွေတကောင်လောက်ဝယ်ပြီး အိတ်ထဲထည့်ဦးမလား တွေးသေးတယ် … ။ မြွေလေးတွေကို သနားလို့ … မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ် … ။ စတိုးဆိုင်က စက်ကျူရတီတွေ အရမ်းစစ်လွန်းလို့ သောင်ညင်တောင် ကတ်တယ် … တကယ့် ဗုံးပါတဲ့ လူကျလျှင် မိကို မမိပဲနဲ့
အင်း…………အဲလိုဆိုတော့လည်း မြွေလေးတော့ မွေးချင်သား
ဘာမြွေ မွေးမှာလဲ ပန်ပန် …
တော်ကြာ မြွေကိုက်ခံရပြီး လွတ်လပ်စွာ သွားလာပိုင်ခွင့်အပိတ်ခံရလို့ ရွာထဲတောင်ဝင်မရဖြစ်သွားမှာစိုးရသေး
တိဝူးလေ မွေးချင်ဒယ် ဆိုလို့
ကော်ပရာကတော့ ရွာထဲကနေပျောက်နေတယ် မြွေဖမ်းမယ့်လူတွေရှိလို့ပါတဲ့
ကျမဘိုကလေးမှာအလုပ်ဝင်နေတုန်းကလည်း မြွေပြပြီး ဘာရောင်းညာရောင်းတွေ နေ့တိုင်းလိုလိုတွေ့တယ်။ ရောက်လာပြီဆို လင်ကွင်း ၂ချပ်တဗြန်းဗြန်းတီးပီး ဆူညံလိုက်တာမှလွန်ရော။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကလည်းမနည်းဘူးဗျာ။
ဟုတ်တယ် . .ခါးပိုက်အနှိုက် မခံရအောင် ပိုက်ဆံအိတ် မသုံးရင် အကောင်းဆုံးဘဲ .. ဟီး ..
ပန်လေးရေ ဦးကြောင်ကြီးက လူအစစ်ပါကွယ်၊ လိမ်နေတာ ဟုတ်ရပါဘူး..။ ဦးကြောင်ကို ဆောင်ထားရင် စွမ်းသကွဲ့၊ မယုံရင် ဆောင်ကြည့်၊ ဝါလည်းကျွတ်သွားပြီဆိုတော့။ ရွာသားများခင်ဗျာ လက်ဖွဲ့အစား ပွိုင့်ပေးခြင်းသီးခံပါ။
ဦးကြောင်ကလူအစစ်ဆိုတာ မယုံဘူး၊ ကြောင်အကြီးကြီး
ုခုချိန်ထိကို အဲ့လူလိမ်တွေရှိနေတုန်းပါဘဲ ဘာလို့လည်းဆိုတော့တွေ့နေရတုန်းမို့ပါ ကြုံဖူးတယ် စနိုးဆို မီတာဆောင်ခိုင်းလိုက်တာ အဲ့လိုမျိုး လူလိမ်တွေလေမှာမြောသွားတာ လူတွေမှများကြီးဘဲ အုံနေအောင်ကြည့်နေလို့စနိုးလည်းဝင်ကြည့်မိလိုက်တာ အရုပ်ခေါင်းကို ကြိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ သမီးလေးဘာစားမလဲ မုန့်ဟင်းခါင်းစားမယ်ဆိုခေါင်းညိတ်လို့ပြောတယ် ကြည့်တော့ကြည့်နေတာ ဘဲ ဘာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ထားလည်းတော့ မသိဘူး ကြည့်နေ၇င်းနဲ့ခေါင်းညိတ်ပြပါတယ် ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးအလိမ်ခံထိဘူးတယ် …